Us About - Anke xirxirida Company Limited
Kale Dhalooyinka gisi Type
V1 Ku marooji Talooyin
V3 Ku marooji Talooyin
Qaaddo Dhalooyinka Daabacaadda
Weecin Dhalooyinka Cap
Jebi-off Dhalo Tip
Dhalooyinka SIZE BIG
500ml Oo Dhalooyinka 1l
Dhalooyinka Beerii Cap
Dhalooyinka Cap Flat
Kale Dhalooyinka Popular PE
Dhalooyinka kale Popular PET
Size kale Dhalada caaga
Iyada oo macluumaadka iyo shuruudaha aan ka helno macaamiisha, Sales Department our, Waaxda Research, Waaxda Production, Waaxda Xakamaynta Tayada, xirxirida & Department Shipping oo Ka dib markii shaqada Waaxda iibka wada si ay u bixiyaan dhalooyin kaamil ah.
si dhakhso ah oo si sax ah Sales Department-Xaqiiji alaabta. Kooxdayada iibka waa xirfadle in alaabta iyo isgaarsiinta. Waxaan leenahay doontaa isgaarsiinta a Raalli ahaanshaha aad iyo xaqiijin faahfaahinta si fudud.
Production Department --- Product waxyaabaha saxda ah ee aad u baahan tahay. Dhamaan shaqaalaha waxaa la kulmay oo muddo bil kasta ayaa tababar. Mashiinnada si joogto ah la baari doonaa iyo dayactirka. By habka this, dhalooyinka tayo sare leh laga been abuurtay.
Waaxda Xakamaynta Tayada --- Hubi kasta aad alaabta u san yahay. nooc kasta oo dhalo leeyahay hab gaar ah oo ay gacanta ku tayada. wax soo saarka kasta oo lagu baari karaa ugu yaraan 3 jeer ka hor maraakiibta. Sidaas dhalada walba uu noqon doono mid sax ah iyo kaamil ah.
Xirxiraan & Department Shipping --- damaanad waxaad heli doontaa dhalooyin wanaagsan in waqti. Products la buuxiyey doonaa kartoon qaro weyn si ay u ilaaliyaan. Waxa kale oo aanu kuu diyaarin doonaa maraakiibta ka hor si loo hubiyo, wax soo saarka mar diyaar, waxaan iyagii dibadda ugu soo diri kartaa.
la xirxirida ANKE shaqaynta, waxaad heli doontaa waxyaabaha kaamil ah iyo sidoo kale adeeg xirfadeed. Sii labada naga mid ah fursad, waxaad heli doontaa lamaane isku halayn karo.
Cinwaankaaga: Room No.2, Xiaogang mingzhu Beiheng Road, Degmada Baiyun, Guangzhou City, Shiinaha.